Karaiba · Janoary, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Karaiba · Janoary, 2008
Tantara mikasika ny Karaiba tamin'ny Janoary, 2008
St Vincent les Grenadines: Mozika meloka
St. Vincent & the Grenadines10 Janoary 2008
“ Noho ny fisian’ny famonoana olona 36 voaisa tamin’ny herintaona dia hita fa ny zavatra tadiavinay farany indrindra (izany hoe ny zavatra halanay) dia mpihira manindrahindra ny fiainan-jiolahy” Izany no lazain’i Abeni momba ny “Asan’ny mozika mandrisika ny maivan-doha” rehefa naheno ny vaovaon’ny fandraràna mpihira iray tsy hihira any St...
Bahamas: Ny fizahantany sy ny heloka bevava
Bahamas10 Janoary 2008
“Tokony ho fantatry ny governemanta sy ny Bahamiana amin’ny ankapobeny fa zavamiseho marolafy izay mitaky zavatra hafa ankoatra ny torapasika mahafinaritra, fitaninan’andro ary ny filomanosana andranomasina ny fizahantany”: Anisan-dresaka nataon’i Adrian Gibson avy ao amin’ny WeblogBahamas.com izany raha niresaka ny amin’ny fizahantany sy ny fanaovankeloka izy.
Barbady: Fanalan’andro politika
Barbady09 Janoary 2008
“Mba misy fikendrikendrena olona politika ve any amin’ny orisanam-panalan’andro any?” Hoy Boyce Voice mpanabolongana avy any Barbady: “Tsy ianao mihitsy no tokony hatahotra mpanao politika fa izy no tokony hatahotra anao. Ry zareo no mila ny vatonao…”
Jamaika: Mpaminany sandoka
Jamaika04 Janoary 2008
“Hita ho ny faminaniana no handanian-dresaka amin'ity taona ity! Ny sasany mahita fa hitombo ny fanaovana heloka, moa ny hafa indray mahita fa hihamamiratra ny ho avy…”: Ny mampalahelo an'i Stunner dia ny “tsy fitokisany velively izay lazain'ireo milaza tena ho mpaminany”. (hatrany ka hatraty io rahalahy a!) Janine Mendes-Franco